नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बैंक लुटपाट गरेको अभियोगमा दुई वर्ष आठ महिना जेल सजाय भुक्तान गरेका ‘अनिल’ रिहा, भव्य स्वागत !
बैंक लुटपाट गरेको अभियोगमा दुई वर्ष आठ महिना जेल सजाय भुक्तान गरेका ‘अनिल’ रिहा, भव्य स्वागत !
राजविराज / राक्षसी राज, अपराधीहरुकै राज, निर्मला जस्ता कयौँ चेलीहरुको बलात्कार र हत्या हुँदा पत्ता नलाग्ने देश, आफ्नो लागि कहिलै केही नमाग्ने तर निमुखा जनताका लागि डा. गोबिन्द केसी अनशन बस्नु पर्ने तर मार्सीबाद जिन्दाबाद भएको देश, नन्दलाल अधिकारीले न्याय माग्दा मर्नु पर्ने र बर्सौँ सम्म लाशले पनि न्याय नपाएर फ्रिज भित्रै सढ्नु पर्ने देश, खोले झोले र नबोलेहरुको देश, वाइड बडी काण्डहरु तैँ चुप मै चुप हुने देश, हजार दुई हजार खाने कर्मचारीलाई अख्तियारले रङ्गेहात समाउने, अर्बौँ खर्बौं कमाउने रमाउने लोकतन्त्र, सँघियता सहितको गणतन्त्र भएको हाम्रो देश नेपालमा हामी जनता पनि अचम्मकै छौं । हाम्रो नयाँ नेपालमा अनौठा घटना क्रम हुने क्रम जारी छ । यसै क्रममा बैंक लुटपाट गरेको अभियोगमा दुई वर्ष आठ महिना जेल सजाय भुक्तान गरेका ‘अनिल’ भनिने अरुणकुमार साह मंगलबार साँझ रिहा भए । सर्वोच्च अदालतको माघ १० गतेको परिपत्रका आधारमा रुपनी–१ रायपुरका साह रिहा हुँदा कारागार गेटमा धुमधामसाथ खुसियाली नै मनाइयो । रिहाको खबरपछि कारागार
पुगेका तत्कालिन माओवादीका नेताहरु, सहकर्मी साथी, परिवारका सदस्यहरुले साहलाई खादा, माला, अविर नै लगाएर स्वागत गरे ।